व्यवसायीको मनोबल बढाउन प्रधानमन्त्रीले मलाई मन्त्री बनाउनु भएको होः उद्योग राज्यमन्त्री दुगडको अन्तर्वार्ता – Clickmandu
व्यवसायीको मनोबल बढाउन प्रधानमन्त्रीले मलाई मन्त्री बनाउनु भएको होः उद्योग राज्यमन्त्री दुगडको अन्तर्वार्ता
क्लिकमान्डु २०७६ मंसिर ६ गते ११:०४ मा प्रकाशित
सेञ्चुरी मसलाको स्वाद अधिकाशं नेपालीको जिब्रोमा झुण्डिएको छ । सोही मसला उद्योगका संचालक मोतिलाल दुगडलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिराज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिए । मसला उद्योगमा पाएको सफलतासँगै दुगडले बिराटनगरमा तारे होटल समेत खोलेका छन् । २०६४ सालमा सदभावना पार्टीबाटसांसद् बनेका दुगडले २०७० सालमा नवनिर्माण नेपाल पार्टी नाम गरेको राजनीतिक दल पनि खोलेका थिए । २०७१ सालमा तत्कालीन नेकपा एमाले प्रवेश गरेका दुगड कम्युनिष्ट पार्टीमा प्रवेश गरेको ५ वर्षमा नै राज्यमन्त्री बन्न सफल भए । प्रधानमन्त्री ओलीसँग निकट व्यवसायीमा चिनिने दुगड उद्योगी व्यवसायीको खस्केको मनोबल बढाउन प्रधानमन्त्रीले आफुलाई सो जिम्मेवारी दिएको बताउँछन् । यसै विषयमा केन्द्रित रहेर राज्यमन्त्री दुगडसँग क्लिकमाण्डूले गरेको कुराकानीः
व्यवसायमा संलग्न व्यक्ति सांसद् हुँदै मन्त्री बन्नुभएको छ । कस्तो लागेको छ ?
म उद्योग व्यवसायमा संलग्न भएपनि राजनीतिमा लागेको १० वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । २०६४ मा पनि सांसद् थिए । आफ्नो पार्टी पनि बनाए । अहिले मलाई प्रधानमन्त्रीज्यूले विश्वास गरेर उद्योग तथा वाणिज्य आपूर्तिराज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिनु भएको छ । प्रधानन्त्रीको विकासको ऐजेण्डालाई पुरा गर्न काम गर्ने हो ।
सरकारसँग अहिले धेरै उद्योगी व्यवसायी डराएका छन् । उद्योग/व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको व्यक्ति नै उद्योग राज्यमन्त्री बनेपछि व्यवसायीहरु डराउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य होला कि नहोला ?
जो व्यवसायीले राम्रोसँग व्यवसाय गरेको छ । गलत नियत राखेर व्यवसाय गर्दैन, त्यो व्यवसायी कहिलेपनि डराउनु पर्दैन । म आफु उद्योगी÷व्यवसायी नै भएको हुँदा नेपालका उद्योगी व्यवसीको दुःख पीडा राम्रोसँग बुझेको छु । उद्योगी व्यापारीहरु राम्रो काम गरेर हिँडेमा सरकारले प्रोत्साहन गर्छ । म उद्योगी व्यवसायीलाई सहज हुने बाटो बनाउँछु ।
सरकारसँग उद्योगी व्यवसायीको विश्वासमा संकट देखिएको छ, त्यसलाई बढाउन के गर्नुहुन्छ ?
अहिले उद्योगी व्यवसायीको मनोबल खस्केको साँचो हो । उद्योगी व्यवसायी प्रोत्साहन हुन सकेका छैनन् । नेपालको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो योगदान हुने हुन्छ । उद्योगी व्यवसायीको प्रतिनिधि भएर नै मैले उद्योग तथा व्यवसायीले चाहिने मन्त्रालयमा प्रतिनिधित्वि गर्दै छु ।
मलाई मन्त्री भएर कमाउनुपर्ने केही छैन । मेरो आफ्नो नै व्यवसाय छ । देशको विकास गर्नको लागि नै व्यवसाय भएको व्यक्ति नै राजनीतिमा होमिएको हो । म आफु उद्योगी व्यवसायीको लागि काम गर्छु । मेरो लागि चुनौती पनि छन् । नेपालका इतिहासमा उद्योग र व्यवसाय चलाएको व्यक्ति मन्त्री भएर आएको छु ।
मेरो लागि अपेक्षा गर्नेहरु बढी छन् । र, त्यो अनुसार काम गर्न सकेन भन्ने चुनौती थपिएको छ । मलाई सहयोग गर्नका लागि सबैको सहयोग चाहिन्छ । तपाईहरु संचारमाध्यमको पनि सहयोग चाहिन्छ ।
तपाई मन्त्री बन्नुअघि सांसद् पनि हुनुहुन्थ्यो, सरकारसँग व्यवसायी डराउनुको खास कारण के हो ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशलाई विकास गर्ने एजेण्डा लिनु भएको छ । त्यसमा साथ दिने हो । कतिपय अवस्थामा सरकार र उद्योगी व्यवसायीबीच ग्याप भएको कारण पनि विश्वासको संकट देखिएको हो ।
नेपालमा उद्योगी व्यवसायीलाई बि ग्रेड मान्ने सोच बढी हाबी छ । सरकार र उद्योगी व्यवसायीबीच समन्वयनको अभाव देखिएको छ । सरकारमा बस्नेहरुको नजरमा जहिले पनि उद्योगी व्यवसायीहरु कालोबजारी गर्छन्, बढी नाफा गर्छन् चोरी निकासी गर्छन् भन्ने छ ।
म आफुले सरकार र निजी क्षेत्रबीच ब्रिजको काम गर्ने छु । म आफुले नै निजी क्षेत्रका समस्या प्रधानमन्त्रीसँग राखेर समाधानको लागि पहल गर्ने छु ।
प्रधानमन्त्रीले देश बनाउने सपना बोक्नु भएको छ । त्यसमा हामीले साथ दिने हो । प्रधानमन्त्रीले नै मलाई उद्योगी व्यवसायीको मनोबल बढाउनको लागि जिम्मेवारी दिनु भएको हो । त्यो जिम्मेवारीलाई पुरा गर्ने काम गर्ने छु ।
तपाईंसँग उद्योगी/व्यवसायीले के अपेक्षा गर्न सक्छन् ?
उद्योगी व्यवसायी म आफंै नै भएको हुँदा उहाँहरुले मसँग आफ्ना समस्या निर्धक्क राख्न सक्नुहुन्छ । त्यो समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने हो ।
बैंकको ब्याजदर घटाऔं, स्वदेशी उद्योग व्यवसायलाई संरक्षण गरौंः अञ्जन श्रेष्ठ
राज्य व्यवसायीको नाफाको भागिदारमात्रै बन्नु भएन, दुःखको सारथी पनि बन्नुपर्छः पशुपति मुरारका
वामदेव गौतमलाई मेरो निर्वाचन क्षेत्र छाड्दिन्छु, सबै मिलेर अर्थतन्त्र जोगाऔं: महेश बस्नेत
अर्थतन्त्र जोगाउन नगदै हस्तान्तरण गर्ने ‘स्टिमुलस’ ल्याउनुपर्छ : अर्थशास्त्री अच्चुत वाग्ले